Ingabe isifo sikashukela sidala noma sivimbele ukwehla kwesisindo? - Ukuphila Kahle | Julayi 2021
Umphakathi Imfundo Yezempilo, Izindaba Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Umphakathi, Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa Izindaba Inkampani, Izindaba Izilwane Ezifuywayo Ukuphila Kahle Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo Ukuphuma Izindaba, Wellness Cindezela
Main >> Ukuphila Kahle >> Ingabe isifo sikashukela sidala noma sivimbele ukwehla kwesisindo?
Ingabe isifo sikashukela sidala noma sivimbele ukwehla kwesisindo?
Ezimweni eziningi, ukwehla kwesisindo kuphezulu ohlwini lwezindlela zokuvimbela nokuphatha isifo sikashukela. Ukwehla kwesisindo kuthuthukisa impilo yenhliziyo, kunciphisa ingozi yomfutho wegazi ophakeme, kugcine amazinga kashukela egazini, kunciphise ukumelana ne-insulin, nokuningi. Kepha kwesinye isikhathi, ikakhulukazi ezimweni zesifo sikashukela soHlobo 1, ukwehla kwesisindo kungaba okungalindelekile, okungajwayelekile, kanye nesizathu sokukhathazeka. Ngenhlanhla, ukwazi ukuthi isifo sikashukela singadala kanjani ukuncipha komzimba, ukuthi yini okufanele uyibheke, nokuthi ungabona nini umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo kungasiza kakhulu ekuphatheni lesi sifo futhi uhlale uphilile.
Ingabe isifo sikashukela singadala ukwehla kwesisindo?
Yebo, kungaba njalo. Isifo sikashukela se-Mellitus inciphisa ukukhiqizwa komzimba kanye / noma ukuphendula kwayo ku-insulin-i-hormone elawula amazinga kashukela egazini ngokusiza umzimba uguqule i-glucose ibe ngamandla. Uma amaseli engakwazi ukudala noma ukusebenzisa i-insulin eyanele ukwenza lokhu kuguqulwa, angahle acabange ukuthi umzimba ubulawa yindlala bese eqala ukudla amafutha emisipha nawomzimba esikhundleni samandla, kubangele ukwehla kwesisindo okungazelelwe. Isikhathi esiningi, lokhu kwenzeka ezimweni zesifo sikashukela soHlobo 1, noma ngabe isifo sikashukela sohlobo lwe-2 singadala ukwehla kwesisindo okungachazeki.
Noma ngubani ongenzi mzamo ohlangene wokwehlisa isisindo kodwa nokho abone ukwehla okungaguquguquki lapho emi esikalini kufanele aqaphele. Lolu hlobo lokwehla kwesisindo olungachazwanga kungaba uphawu lwesifo sikashukela esingatholakali. Kungabuye kuqhamuke kwezinye izimo eziningi, kufaka phakathi izingqinamba ze-thyroid, isifo se-celiac, isifo sikaCrohn, umdlavuza, nokuningi. Ukuphela kwendlela yokwazi ngokuqinisekile ukuvakashela abahlinzeki bezempilo.
Ucwaningo lukhombisile ukuthi imishanguzo ethile yesifo sikashukela, efana metformin , futhi imbangela futhi usize ukugcina ukulahleka kwesisindo ngaphezulu kweminyaka eminingi. Eminye imishanguzo yesifo sikashukela enganciphisa isifiso sokudla futhi ibangele ukuncipha ifaka i-Byetta ne-Victoza.
Nini ukubona umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo
Kwesinye isikhathi, isisindo somzimba singaguquguquka ngokwemvelo, ngakho-ke umuntu kufanele akhathazeke nini? Ukuvumelana okujwayelekile ngukuthi ukwehla okungahlosiwe ngo-5% noma ngaphezulu kwesisindo somzimba esikhathini esiyizinyanga eziyisithupha kuya kwezingu-12 akujwayelekile.
imuphi umuthi wokungezwani komzimba ophephile ezinjeni
Ukwehla kwesisindo kungazelelwe kungaba uphawu lokukhuphuka noma okungalawulwa kwamazinga eglucose egazini, kusho uLisa Moskovitz, RD, isikhulu esiphezulu se- NY Iqembu Lokudla . Noma ngabe ulahla isisindo ngamabomu noma cha, noma ikuphi ukulahleka okungaphezu kwamakhilogremu amabili kuya kwamathathu ngesonto kufanele kubikwe kumhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
Ehlangothini le-flip, ukukhuluphala ngokweqile kuyingozi enkulu yesifo sikashukela sohlobo 2. Abantu abanenkomba yomzimba (BMI) engama-30 noma ngaphezulu bavame ukuba nezinga eliphakeme lokumelana ne-insulin, okungaholela kuhlobo lwesifo sikashukela soHlobo 2. Akuzona zonke izimo zokukhuluphala okuholela kusifo sikashukela, kepha ngokuqinisekile kwandisa amathuba okusikhulisa. Ngaphezu kwalokho, ukukhuluphala ngokweqile kungandisa izimpawu zesifo sikashukela kunoma ngubani osenaso.
Ngalesi sizathu, abahlinzeki bezokunakekelwa kwempilo kanye nezazi zokudla bavame ukuthuthukisa ukudla noma izinhlelo zokwehlisa isisindo seziguli ezinesifo sikashukela noma ama-prediabetes. Lezi zinhlelo zivame ukufaka izinhlelo zokudla nezindlela zomsebenzi zomzimba ezisiza iziguli ukuthi zithole futhi zigcine isisindo esinempilo, zinciphise ubungozi noma ubunzima besifo sikashukela soHlobo 2. Ngokuvamile, lokhu kubandakanya ukuhlaziya imikhuba yokudla nokuzivocavoca kwamanje yesiguli, bese sibeka izinguquko zendlela yokuphila ezosiza ukufeza imigomo yomuntu siqu yokwehlisa isisindo.
OKUSHIWO: Izibalo zokukhuluphala ngokweqile nokukhuluphala
Ungakwenza kanjaningokuphephaukunciphisa umzimba lapho unesifo sikashukela
Noma abantu abanesifo sikashukela bengathola ukwehla kwesisindo okungazelelwe, okungaqondakali, lokhu akuwona umphumela ovame kakhulu. Kwenzeka ikakhulukazi ezimweni zesifo sikashukela sohlobo 1, eziqukethe kuphela 5% kuya ku-10% kuwo wonke amacala esifo sikashukela. Kaningi, kuphambene — ukunciphisa umzimba kuwumzabalazo. Ukumelana ne-insulin kuholela emazingeni aphezulu e-insulin, angakhuphula indlala nokudla ngokweqile. Futhi ngesikhathi sokwelashwa kwe-insulin, umzimba ugcina i-glucose eningi njengamafutha. Zombili lezi zimo zingaholela ekuzuzeni isisindo noma, okungenani, ubunzima obukhulu bokulawulwa kwesisindo.
indlela engcono kakhulu yokwelapha i-hangover
Ngenkathi lungekho ikhambi lohlobo lwesifo sikashukela esingu-Type 2, ukuncipha kwesisindo okuqhubekayo ngokudla nangokwenza umsebenzi womzimba kungasiguqula (uqobo inani yesisindo esidingekayo iyahlukahluka). Lokhu akusho ukuthi isifo sikashukela asisekho unomphela. Kusho nje ukuthi lesi sifo siyathethelelwa, kanti isiguli siyasondla amazinga kashukela anempilo , kodwa izimpawu zingabuya njalo.
Umbuzo omkhulu kunayo yonke: Iyiphi indlela engcono nephephile yokwehlisa isisindo uma unesifo sikashukela? Kukhona ukudla okuningi kwemfashini okungenampilo. Impela, ukungasebenzisi lutho ngaphandle kwejusi yesanqante isonto elilodwa kungasiza ekunciphiseni isisindo, kepha mhlawumbe akuyona inketho enempilo ngokuhamba kwesikhathi. Kaningi kungcono ukudla okomuntu siqu, okuyindilinga, ukuphatha izingxenye, nokuzivocavoca umzimba njalo. Nazi izinketho zokwehlisa isisindo sikashukela ezingasebenza kangcono:
yini ukufundwa koshukela wegazi okujwayelekile
Ukudla okunama-calories amancane: Le yindlela yokuhlola isisindo ehlolwe isikhathi. Ukushoda kwekhalori usuku nosuku kuzoholela ekwehliseni isisindo. Imvamisa, lokhu kukhawulela ukungena kwekhalori ku-1,200 kuye ku-1,600 ngosuku kwabesilisa kanye ne-1,000 kuya ku-1,200 ngosuku kwabesifazane. Kodwa futhi kumayelana nokudla amakhalori afanele — ukudla okulinganiselayo okunemifino eyanele, izithelo, amaprotheni, kanye ne-carbohydrate. Isifundo esivela e-U.K. ikhombise ukuthi abantu abangama-45.6% abanesifo sikashukela soHlobo 2 ababambe iqhaza ohlelweni lokulawulwa kwesisindo esinekhalori eliphansi bathole ukuxolelwa kungakapheli unyaka owodwa.
Ukudla okunama-khalori aphansi kakhulu (ama-VLCD): Ama-VLCD angumkhuba wakamuva wokukhawulela isiguli sibe ngaphansi kwama-calories angama-800 ngosuku. Kunzima, kepha ku isifundo se-2019 , iziguli zesifo sikashukela nge-calorie engaphansi kuka-600 ngosuku i-VLCD ikhombise ukuthuthuka okusheshayo ekulawuleni kwe-glycemic emasontweni amabili nje kuphela, kwathi ama-79% athola ukuxolelwa emasontweni ayisishiyagalombili kuya kwayi-12.
Ukugwema ukudla okuthile: Ngokuqondile, abahlinzeki bezokunakekelwa kwempilo bangancoma ukunciphisa ngokweqile noma ukusika okusanhlamvu okucutshunguliwe, imikhiqizo yobisi egcwele amafutha, ukudla okunamafutha agcwele noma okuhambisa, nokudla okunoshukela noma okokunandisa. Lokhu kudla kungadala izipikisi kushukela wegazi futhi kwandise ukudla okunamafutha.
Ukulawulwa kwengxenye: Lokhu kuchaza kahle. Ukudla ngokweqile kungaholela ekutholeni isisindo, okuyingozi ekunakekelweni yisifo sikashukela. Ukusiza ukugcina iziguli zilandelana, izazi zokudla zivame ukudala uhlelo lokudla olulinganiselayo ukunciphisa ushukela namafutha ngenkathi zifundisa imikhuba yokudla enempilo.
Ukuvivinya umzimba njalo: Ukuzivocavoca umzimba kunganciphisa ushukela wegazi futhi kwandise ukuzwela kwe-insulin amahora angafinyelela kwangu-24 ngemuva kokuzivocavoca. Kodwa-ke, lokhu kuncike ekukhuthazeni nasekusebenzeni kwesikhathi sokusebenza, ngokusho kwe- I-American Diabetes Association (ADA) . Abahlinzeki bezokunakekelwa kwempilo bangakha inqubo yokuzivocavoca ukubhangqa uhlelo lokudla lwesiguli lapho belapha isifo sikashukela.
Lokho kusho ukuthi, isifo sikashukela singaphazamisa ubuhlobo bomuntu nokudla, kusho uMoskovitz. Akuyona into engavamile ukuhlakulela amaphethini wokudla angalungile noma ngisho ukuphazamiseka kokudla ngemuva kokuxilongwa . Ngaleso sizathu, indlela eyenziwe yaba ngeyakho, eguquguqukayo, nebandakanya wonke umuntu evumelana nezidingo zomuntu nendlela yakhe yokuphila ibaluleke kakhulu empumelelweni yesikhathi eside.
UMoskovitz uncoma ukudla okuphansi kwe-glycemic enokudla okuningi okutshalwe ezitshalweni nase-fiber, amaprotheni anciphile, namafutha alwa nokuvuvukala, [okuyindlela yokwelapha engcono kakhulu lawula i-hemoglobin A1C , isilinganiso sikashukela egazini esikhathini esiyizinyanga ezintathu. Ululeka ngokuthi abantu abanesifo sikashukela kufanele badle utshwala ne-caffeine ngokulinganisela (ngoba bobabili bangathinta amazinga kashukela egazini) futhi badle ukudla okunomsoco noma ukudla okulula okuqukethe i-fiber, amaprotheni, namafutha njalo emahoreni amathathu kuya kwamahlanu usuku lonke.
Kuthiwani ngokudla okune-carb ephansi?
Ukudla okuphansi kwe-carb ne-zero-carb bekushisa eminyakeni eminingana edlule. Izinkulungwane zabantu ziye zagxumela (futhi kwesinye isikhathi zishiya) i-Atkins Diet futhi keto ukudla amabhandeki. Abanye abantu bafunga ngabo, noma kunjalo izifundo ezithile sibonise izingozi zesikhathi eside zokusika i-macronutrient yonke.
Uma kukhulunywa ngesifo sikashukela, ukubalwa kwe-carbohydrate nakho kungenza ukwehla kwesisindo kube lula futhi kuphumelele, kusho uMoskovitz. Kodwa ngenkathi ukubalwa kwe-carb kuvame ukusiza, ukususa ama-carbs akuyona inketho yesikhathi eside engcono kakhulu ngaso sonke isikhathi. Kukhulu ngokudla okulungile uhlobo lwama-carbohydrate ngamanani alungile. Ama-carbs acwengekile, ahlanganiswe nesinkwa esimhlophe, izimpahla ezibhakiwe, noshukela kungadala izipikili ezisheshayo eglucose yegazi. Ama-carbs ayindida nemicu evela ezinhlamvwini ezigcwele, izithelo, nemifino kuthatha isikhathi eside ukuwohloka, ukuvimbela isipikha.
I-Amoxicillin vs. penicillin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
indlela yokubhekana nokutheleleka endlebeni
ukuthatha usuku lwezempilo yengqondo esikoleni
izindlela zemvelo zokususa ukutheleleka kwesinye
I-nexium ingaphezu kwesidakamizwa esiphikisayo
Ngingathatha i-vitamin b12 ne-levothyroxine